Uykena njani i-Android ye-Malware ngoKhuseleko lokuDlala | I-Androidsis
Uyihlalutya njani i-malware kwi-Android kunye nokudlala ukukhusela
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Khu seleko
I-Google Play Protect sisixhobo esivelisiweyo kwi-Android ngaphezulu konyaka odlulileyo, phantse. Sisixhobo esiluncedo kakhulu kwi-Android, enkosi onokuthi uskene kwaye ubhaqe usetyenziso olubi. Ibe luncedo kakhulu kuGoogle xa kuziwa kuyo fumana ii -apps ezinobungozi kwivenkile yeapp.
Ukongeza, kunokuba luncedo kakhulu kubasebenzisi. Kuba sinako Sebenzisa iGoogle Play Protect ukufumanisa ukuba sinayo nayiphi na intsholongwane okanye usetyenziso olubi olunjenge umboneleli kwifowuni yethu. Isixhobo sokufumanisa esinokusinceda kwisininzi seemeko ezahlukeneyo. Ke ngoko, apha ngezantsi siza kuthetha ngakumbi ngayo kwaye isebenza njani.
UGoogle ulawula usetyenziso olayishwe kwiVenkile yokudlala. Injongo kukuthintela eziapps ekubeni zibenalo naluphi na uhlobo lwe-malware okanye ukwenza iintshukumo ezingavumelekanga. Kodwa, ngamanye amaxesha kukho usetyenziso olwaziyo ukugqithisa lonke ulawulo kwivenkile yesicelo. Ngesi sizathu, inkampani isebenzise izixhobo ezinje nge-Play Protect.
Enkosi kubo ngokugcina ulawulo rhoqo lwezicelo iyafumaneka kwiVenkile yokudlala. Ke ukuba kukho iapp ene-malware, inokufunyanwa kwaye ithintelwe ukuba ifakwe kwifowuni ye-Android. Kodwa ukuba ufake usetyenziso kwifowuni yakho ungasisebenzisa esi sixhobo. Ngayo uyakwazi ukuskena ifowuni nasemva kokuyifaka.
Ngapha koko, Dlala uKhuselo Hlalutya zonke iiapps ozifakileyo kwifowuni yakho ye-Android yokoyikisa. Ke lukhetho oluluncedo kakhulu kolu hlobo lwemeko. Ukuba uyafuna, unokwenza isixhobo sivavanye usetyenziso olufakwe kwifowuni ngokwakho. Sikubonisa indlela engezantsi, uya kubona ukuba kuyinto elula kakhulu ukuyenza.
Hlalutya iiapps ngePlay Protect
I-Play Protect idityaniswe kwiGoogle Play Ivenkile app kwifowuni yethu ye-Android. Inecandelo elithile ngaphakathi kweapp, apho olu hlalutyo lwezicelo lwenziwa khona. Into eqhelekileyo kukuba akukho nto iqhelekileyo. Kodwa ukuba esi sixhobo sibhaqa i-app ene-malware, iya kuxelwa, ukuze ususe usetyenziso kwifowuni yakho. Kule meko kuyacetyiswa emva koko Ingxelo yatsho iapp.
Ke ngoko, kuya kufuneka uvule usetyenziso lweVenkile yokudlala kwi-smartphone yakho ye-Android. Xa ungaphakathi vula imenyu esecaleni yeappUkucofa kwimigca emithathu ethe tye ebonakala kwinxalenye ephezulu yasekhohlo kwesikrini. Le menyu iya kuvulwa, ngeendlela ezininzi. Olunye lwezi zikhetho kukuKhusela. Emva koko singena kweli candelo.
Ngaphakathi kweli candelo uza kubona ukuba Isixhobo esihlala siqhuba ukuskena kwizisongelo Rhoqo. Ukuba uyafuna, ungayicela ukuba iqale ukukhangela i-malware ngelo xesha. Uya kufumana icandelo losetyenziso oluhlaziyiweyo kutshanje. Ngaphantsi kwayo unomsebenzi wokwenza ukuba iqhube ukuskena okutsha. Ngale ndlela, iya kuhlalutya zonke iiapps kwi-smartphone yakho, ezo zikwinkqubo okanye ezo ukhuphele kuzo iVenkile yokuDlala.
Ngaloo ndlela, ukuba i-Play Protect ibhaqa into ethile, iya kuboniswa kuwe kweso sikrini. Ukuba kukho isicelo esibangela iingxaki okanye esibeka ukhuseleko kwifowuni yakho, isixhobo siya kukuxelela. Kwimeko apho oku kusenzeka, kungcono ukuqhubeka nokucima usetyenziso, ukuthintela iingxaki ezinokubakho. Kusenokwenzeka ukuba uziqaphele iimpawu emnxebeni, ezinokukwenza ukuba ucinge ukuba une-malicious app efakiweyo.
Uhlalutyo olulandelayo lwe-Play Protect lunokusebenza njengendlela yokuqinisekisa ukuba unayo i-app enobungozi okanye i-malware efakwe kwifowuni yakho. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukwenza amanyathelo malunga noku kwaye uphelise esi sisongelo kwi-smartphone yakho. Ngaphandle kwamathandabuzo, sisixhobo esiluncedo kakhulu kukhuseleko lwe-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyihlalutya njani i-malware kwi-Android kunye nokudlala ukukhusela
Ifolda ekhuselekileyo ye-Samsung: Iyintoni kwaye isebenza njani
UXiaomi sele esebenza kwiXiaomi Mi A3